पत्रपत्रिकाबाट – जलजला अनलाइन
प्रेमिका भेट्न गएका १९ वर्षीय किशोरको घाँटी रेटेर हत्या
बैशाख २, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–८ का १९ वर्षीय सुविल बडायकको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको छ । यो खबर अन्नपूर्णमा छ, पाँच दिनदेखि बेपत्ता भएका सुविलको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा सोमबार शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–७ स्थित उग्रतारा सामुदायिक वन छेउको नेउरा खोला किनारामा जमिनमा गाडेको अवस्थामा […]
Posted on April 15, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on प्रेमिका भेट्न गएका १९ वर्षीय किशोरको घाँटी रेटेर हत्या
जेट एयरवेजले देखायो यस्तो चमत्कार, अब के होला ?
बैशाख २, काठमाडौं । भारतीय वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेजले काठमाडाैं उडान बन्द गरे लगत्तै काठमाडाैं-दिल्ली, काठमाडाैं-मुम्बइको रूटमा भाडादर दोब्बर वृद्धि भएको छ। आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको जेटले २०७५ चैत २९ देखि काठमाडाैं रूटमा हुने सबै उडान स्थगित गरेको छ। आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै जेटले मे ५ तारिखसम्मका लागि काठमाडौं उडान स्थगित गरेको पत्र त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयलाई […]
Posted on April 15, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on जेट एयरवेजले देखायो यस्तो चमत्कार, अब के होला ?
को हुन् कोपाइलट सुजीत लामा ढुंगाना ? [नालीबेलीसहित]
बैशाख १, काठमाडौं । लुक्ला विमानस्थलबाट आइतबार बिहान उडान गर्ने क्रममा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका कोपाइलट सुजीत लामा ढुंगानाले समिट एयरकै जहाज ६ सय घण्टा भन्दा बढी उडाइसकेका थिए। रामेछापबाट लुक्ला पुगेका यात्रु ओरालेर रामेछाप नै फर्कन लाग्दा जहाज रनवेमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको थियो। जहाज पार्किङ गरिरहेको श्री र मनाङ एयरको हेलिकोप्टरमाा ठोक्किन पुगेको थियो। दुर्घटनामा […]
Posted on April 14, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on को हुन् कोपाइलट सुजीत लामा ढुंगाना ? [नालीबेलीसहित]
‘जन्मदिनमा आफ्नै जहाजले ठोक्यो’, घाइते क्याप्टेनले गरे यस्तो खुलासा (भिडियो)
वैशाख १, काठमाडौं । सोलुखुम्बुका स्याङबोचे कार्की आजै ५२ वर्ष लागे। नयाँ वर्ष आएसँगै उनको उमेर पनि एक वर्ष उकालो लाग्छ। अर्थात् वैशाख १ गते उनको जन्मदिन। धुमधामसँग जन्मदिन मनाउने रहर त उनलाई पनि नभएको कहाँ होर, तर के गर्नु नगरी काम पुग्दैन खाना साँझ र बिहान! यो खबर प्रशन्न पोखरेलले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । […]
Posted on April 14, 2019 April 14, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on ‘जन्मदिनमा आफ्नै जहाजले ठोक्यो’, घाइते क्याप्टेनले गरे यस्तो खुलासा (भिडियो)
‘एक बर्ष अघि मात्र बिहे गरेका सुजितलाई एक्ली आमाले पाइलट पढाएकी थिइन्’
बैशाख १, काठमाडौं । वैशाख १नयाँ वर्षको दिन आइतबार बिहानै दुखद खबर आयो। सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा जहाज र हेलिकप्टर ठोक्किए। रामेछापको मन्थलीका लागि उड्न लागेको जहाजले रनवे छोडेर आकाशतिर आउन सकेन। बरू चिप्लिएर बाहिर गयो। पार्किङ गर्न लागेको मनाङ एयरको हेलिकप्टरसँग ठोक्कियो। दुर्घटनामा परी समिट एयरका कोपाइलट सुजित ढुंगानासहित नेपाल प्रहरीका २ असईको ज्यान गयो। […]
Posted on April 14, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on ‘एक बर्ष अघि मात्र बिहे गरेका सुजितलाई एक्ली आमाले पाइलट पढाएकी थिइन्’
विध्वंसात्मक त्यो बिपत ‘टोर्नेडो’ भएको कसरी पुष्टि भयो ? (भिडियोसहित)
चैत २९, काठमाडौँ । सुरुमा बारा र पर्साको त्यो हुरी सामान्य नै होला भन्ने लागेको थियो। तर पछि ठूलो जनधनको क्षति भएको समाचार आउन थाले। वातावरण विज्ञानको विद्यार्थीले यी सबै विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। मौसम, जलवायुको विषयमा अझ चासो हुन्छ। भोलिपल्ट सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक र ट्विटरमा घटनाका क्षति तथा असरका विवरण आए। […]
Posted on April 12, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on विध्वंसात्मक त्यो बिपत ‘टोर्नेडो’ भएको कसरी पुष्टि भयो ? (भिडियोसहित)
चैत २३, काठमाडौँ । गत आइतबार बारा, पर्सामा विध्वंश मच्चाउने वर्षासहितको आँधीबेहरीको नाम ‘टोर्नाडो’ आएको पुष्टि विज्ञले गरेका छन् । यो खबर चाँदनी हमालले गोरखापत्रमा लेखेकी छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्राज्ञ तथा वरिष्ठ मौसमविद् मदनलाल श्रेष्ठसहितको एक टोलीले गरेको अध्ययनले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक टोर्नाडो आएको पुष्टि गरेको हो […]
Posted on April 6, 2019 Author Comments Off on नेपालमा पहिलोपटक ‘टोर्नाडो’ आएको पुष्टि, जहाँ छोयो, त्यहाँ ध्वस्त पार्‍‍याे
चैत्र २०, काठमाडौँ । अभिनेत्री रेखा थापाको परिचय त अब दिइराख्नु परेन । यो खबर साप्ताहिक इकान्तिपुरमा खबर छ । झण्डैं २० बर्षअघि नेपाली चलचित्र उद्योगमा छिरेकी यि अभिनेत्री पछिल्लो समय राजनितीमा पनि सक्रिय छिन् । केहि बर्षअघि राप्रपाको केन्द्रिय सदस्यमा राम्रै मतका साथ बिजयी भएकी थापा अहिले कुन पार्टिमा छिन् ? कसैलाई पत्तो छैन […]
चैत १९, काठमाडौँ । गत बुधबार साँझ बुटवल मैनाबगरमा भएको फिरोज हत्याकाण्डमा उनकै श्रीमतीको संलग्नता रहेको खुलेको छ । यो खबर तेजेन्द्र के.सी.ले रातोपाटीमा लेखेका छन् । हत्या गरिएका ४५ वर्षीय फिरोज अन्सारी (खान) की श्रीमती साहिन खातुनसँगै प्रेमसम्बन्धमा रहेका भारत बिहार बेतिया ४२ वर्षीय साधिर हुसेनले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । खातुन र […]
Posted on April 2, 2019 April 2, 2019 Author Comments Off on फिरोज हत्याकाण्ड: भिनाजुको प्रेममा परेकी श्रीमतीबारे बाहिरियो यस्तो अचम्मको रहस्य